Ogaden News Agency (ONA) – Ree Itoobiya oo Gudaafad & Qashin Ku Dhex qarqoomay, Naf adagaa Ma Xaar-walwaal Baa!! By: Xaaji M/rashiid
Ree Itoobiya oo Gudaafad & Qashin Ku Dhex qarqoomay, Naf adagaa Ma Xaar-walwaal Baa!! By: Xaaji M/rashiid
Posted by Daljir	/ March 28, 2017
Aduunyadan aynu joogno sabankan waxaa ka dhaca dhacdooyin iyo qisooyin cajiib ah oo kala wada duwan. Qaar waa Rabaani oo xaga Allewayne ayay ka yimaadaan, sida dhul gariirka oo Guryaha dabaqyada ah buburiya , Daadadka oo raafa dhamaan waxa dhulka dushiisa saaran, Dabaylaha oo la haada dhamaan wixii u fuqa oy dhirtu kamid tahay iyo Badaha oo dajiya Maraakiibta waawayn iyo waxa saaran oo Dad iyo Duunyaba ah.
Qaarka kale oo dhacdooyinka kamid ah balse ay Dadku gacmahooda ku kasbadaan ayaa jira oy kamid yihiin colaadaha dhexmara kadibna sababa inuu dhiig badani bilaash ku daato. Waxaa kale oo jira in markay xumaantu badato ay soo butaacaan cudurro falkooda la waayay oo galaafta nolosha khalqi farabadan. Waxaaba kasii daran cadaalad xumada oo keenta qax iyo isnac aan xad lahayn.
Aan hoos u dagee, Wadanka Itoobiya waxaa lagu xantaa mararka qaarna lagu xariiraa inuu yahay dal aad ugu liita xaga nadaafadda, waa marka hore waa wadanka kaliya ee quuta Hilibka qaydhiin ee dhiigu ka da’ayo, waa marka labaade waa wadanka dadkiisu caado u leeyahay inuu Gidaarrada Guryaha iyo Dariiqyada kaadi ka buuxiyo ood is leedahay meesha ma xoolaa isticmaalay! waa marka sadexaade waa bulshada ayna jirin cid la wadaagi karta Musqulahooda oo waxaa arinkaa ka makhraati kacaya Dadkii Soomaaliyeed ee Guryaha ka kiraystay ee duruuftu badday.
Dawladda itoobiya waxay caanka ku tahay inuu dadkeedu la daalaa dhaco Gaajada, taasina waxay keentay inuu dawarsigu ka mid noqdo mid kamid ilaha nolosha ee dadku u shaqo tago aroortii. Waxaa la sheegay inay dadka qaarkii indhaha kasoo tuuraan qaar kale si loogu dawarsado una sahlanaato in wax lagu sadaqeysto! Waxaa dareemi kara inay xaalad adagi haysato bulshada itoobiya cid kasta oo soo martay caasimadda dalkooda ee ADIS ama xataa magaalooyinka kale. Dabaqada sare ee gacanta wax ku haysata waa manaxayaal oo dadku hortooda ayay daadsanyihiin, kuwa dawlada sheegatana warkoodaba daa oo inay waxooda siiyaan iska daaye wixii caalamku ugu dhiibay ayay ka cuneen!
Akhristow waan yaabay, adiguna waad yaabtay, wariyaasha caalamkuna way wada yaabeen markay maqleen wixii ka dhacay goob ku taala duleedka caasimadda gumaysiga itoobiya ee Adis ababa. Waxaa la ogyahay inay shacabka itoobiya saarantahay cunqabateyn joogto ah tasoo sababtay inay dadku ku xoomaan meelaha cuntooyinka lagu soo daadiyo si ay uga helaan waxay Beerka ku qabtaan.
Waxaa kale oy dadkii ku kaliftay inay ag dagaan goobtii 50 sano wax kabadan Qashinka iyo Gudaafadda lagu tuulayay ee Caasimadooda. Laga yaabe inayba qaarkood ku hoos noolaaayeen gabiyada Qashinka ah kadib markay dhisan kari waayeen Buul xun ama wax lamid ah oy kaga maarmaan Goobta gudaafadda ah!
Waxaa caadi ka ah saxaafadda caalamka dhexdeeda in la maqlo, Dal hebel waxaa ku dhuftay dhul gariir, duufaano ama daadad waxaana is daba maraya gurmadka si loo badbaadiyo dadwaynaha. Maalmo kadibna waxaa dhacda inaad maqasho dadkii qaarna waay dhinteen, qaarna wali waa la baadi goobayaa. Intaasi waa wax kamid ah masiibooyinka Rabaaniga ah, balse waxa saxaafada dhagaheeda ku cusub waa arintan soo socota-
Todobaadyadii lasoo dhaafay Waxaa ka dhacay dalka xaaraanta ku dhisan ee itoobiya dhacdo ugub ah, taasoo ah in mar kaliya lagu baraarugay dabaqyo qashin iyo gugaafad ah oo ku habsaday dadkii danyarta ahaa ee nolosha ka raadsanayay goobtaas. Waxaa is daba maray gurmadkii kadibna warkii ayaa noqday 100 baa dhimatay qaarna wali waa la la’yahay!. Waxay dhacdadaasi noqotay mid fashil iyo ceeb huwisay talsika EPRDF/TPLF waa haday wax fahmayaan! Hay’adaha caalamka kuwooda xuquuqul insaanka iyo kuwo dawliga ah ayaa isku si u eedeeyeyay maamulka Woyaanaha iyagoo tilmaamay in dadkaas la dayacay!
Dhacdadan foosha xun ayaa sababtay inaan dib u xusuusto dhaqankii uu lahaa mid kamid ah noolaha loo yaaqaano Xaar,walwaal ama Doorshaan kasoo ah inuu saxarada xoolaha shaqo ka dhigto Gurina ka sameysto iyo waliba Kubad uu ku ciyaaro. Waxaa lagu dacaayadeeyaa in haduu barfuun uriyo ay naftuba ka haadayso ileen waa wax gole qadhmuun kusoo noolaaye! Mar haduu guumaysiga itoobiya dadkiisii gaadhsiiyay heer ay gudaafadaha nolol karaadiyaan sida noolaha aan soo sheegay, waxaa la gudboon Qowmiyadaha xornimo doonka ah ee somalida Ogadenya, Oromia, Gambeella, Sidama iyo Binshigul inay halgankooda xoojiyaan si ay uga xoroobaan Woyaane Qalbi dhagax, hadii kale wa inay ogaadaan in Taliskaasi badi doono nolosha gudaafadda ah ee maanta la wada arkayo natijadeeda!
Qoysaska ay ku habsadeen Duudaha qashinka ah, kadibna ku halaagsamay anigoo u fiirinaya Baabka insaaniyada ama Raxmadda waxaan leeyahay- waan ka xumahay in heerkaa laa gaadhsiiyo dad bani’aadam ah oo ilaahay karaameeyay. Waxaan tuhun wayn ka qabaa in dadka qaarkii u dhinteen qadhmuunka iyo biirta Konton sano jirsaday awgii iyagoon jidhkooda waxba gaadhin! Si kastaba ha ahaatee dadka ku qarqoomay lakabyada qashinka ah ayaa banaanka soo dhigay sheegashadii Gumaystaha itoobiya ee ahayd inuu gobol walba horumar u sameeyay!!!
Gunaanadkii iyo gabagabadii anagu Soomaali baanu nahay ilaahayna xikmad ayuu nasiiyay oo horaanu u nidhi- Ninkaad kabo katolan kabihiisaa la eegaa, 20 sano kahor ayay Soomaalida Ogadenya fiiriyeen maamulka Woyaanaha, waxayna ku arkeen kabo la’aan, arrad iyo diif, wayna ka tashadeen.